Ihe niile banyere Nolvadex
1.What bụ Nolvadex? Kedu ka o si arụ ọrụ? 2. Nolvadex na-eji
3.Nolvadex usoro onunu ogwu Nsonaazụ 4.Nolvadex
5.Nolvadex ọkara ndụ 6.Nolvadex mmetụta dị n'akụkụ
7.Nolvadex uru Nyocha 8.Nolvadex
9.Nolvadex maka ire ere 10.Nolvadex na-emeso infertility na ụmụ nwanyị
1. Kedu ihe bụ Nolvadex? Kedu ka o si arụ ọrụ?
N'oge ahụ, ọrịa cancer ara bụ otu n'ime ọrịa kachasị nke ụmụ nwanyị na-ata ahụhụ. Enwere otutu nyocha ma a ka na-eme ya na ọgwụ ndị nwere ike inyere mmadụ aka ibi ndụ nke ọrịa kansa. Nolvadex (54965-24-1) bụ otu n'ime ọgwụgwọ ndị egosila na ọ bara uru na mgbochi na ọgwụgwọ ọrịa kansa. Ihe ọzọ karịa na ego ya na-eme ka ọ bụrụ ebe ọ bụla.
Nolvadex (54965-24-1) bu ute ogwu bu nke di irè n'ile ndi mmadu ndi nwere ogo ogwu. A chọpụtara ya na 1966, ọmụmụ ya dịka ọgwụ ọgwụgwọ cancer na-amalite na 1970. Na 1998, ọ ghọrọ ọgwụ mbụ iji nweta nkwado site n'aka FDA iji nyere aka igbochi ọrịa kansa. Nnyocha e mere gosiri na Nolvadex belatara ohere nhụjuanya nke ọrịa kansa site na 50% maka ndị inyom nwere nnukwu nsogbu nke ịmepụta ya.
Iji ghọta otú Nolvadex si arụ ọrụ, ị kwesịrị ịmara na mkpụrụ ndụ kansa kansa na-achọ ka hormone nwanyị a maara dị ka estrogen iji too ma mụbaa. Ya mere, Tamoxifen nwere ike ịkwụsị nke a site na ịlụ ọgụ na estrogen na-ejide ya na ndị na-anabata estrogen na mkpụrụ ndụ kansa kansa.
Nolvadex (54965-24-1) bụ nke a na-akpọkarị estrogen receptor modulator (SERM). Ya mere, ọ na-ebelata uto na mmepụta nke mkpụrụ ndụ kansa kansa site na igbochi estrogen n'ime obi.
Ndị ọzọ karịa estrogen dị na Nolvadex na mkpụrụ ndụ kansa kansa, ọ na-ebipụta nti utịp nke estrogen na-akpata na usoro ahụ. Maka ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ postmenopausal bụ ndị na-agba ọsọ, ọ nwere ike ibelata ọrịa nke ọrịa obi na osteoporosis (ọnọdụ nke na-akpata nke ahụ na-eduga n'ịkụda ọkpụkpụ) n'ebughị ụzọ merie ọgwụgwọ nke ọgwụgwọ.
2. Nolvadex na-eji
Nolvadex anọwo na-eji ya eme ihe kemgbe afọ ole na ole n'ịgwọ ọnọdụ dị iche iche. Ọ na-abịa dịka onye nzọpụta na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ikom na ndị inyom na-arịa ọrịa dị otú ahụ ọ dịkarịa ala otu oge n'oge ndụ ha. Lee ụfọdụ n'ime Nolvadex na-eji nke mere ka ọ pụta ìhè;
Nolvadexmay ga-edozi ma ndị nwoke ma ndị inyom ka ha na-agwọ mkpụrụ ndụ lymph dị mma ma ọ bụ na-aṅụ lymph-ọrịa obi ara na-ezighị ezi mgbe ha jesịrị ịwa ahụ nke ọma. Nolvadex eji gosi na ọ bara uru mgbe ị na - emeso kansa nwere ezigbo estrogen na ndị na - anabata ya. Nolvadex eme ka ọrịa cancer nwee ike ịfefe ya n'amaghị.
Ndị ikom na ndị inyom nwere ọrịa cancer nke metastatic (cancer nke gbasaa) nwere ike ide Nolvadex.
Ụmụ nwanyị ndị na-arịa ọrịa carcinoma na-arụ ọrụ na steeti (DCIS) na ndị nwere ọgwụgwọ na ọgwụgwọ radiation pụrụ ịba uru site na ọgwụ a. N'okwu a, Nolvadexmay belata ihe ize ndụ nke ịta ahụhụ site na ọrịa cancer. A ghaghị ịtụle ihe ize ndụ na uru nke inwe ọgwụgwọ a tupu oge eruo.
Ụmụ nwanyị ndị nọ n'ihe ize ndụ nke ịmalite ịmalite ịba ọrịa ara ara na-enyekwa ọgwụ iji nyere aka gbochie ohere nke inwe ya. A ga-atụle ihe ize ndụ na uru ndị dị na ịnweta ọgwụgwọ a na nke a.
Otu n'ime nmonvadex a na-ejighi mara ihe na-eji ọgwụgwọ ọrịa cancer nke ovarian.
3. Nolvadex usoro onunu ogwu
Nolvadex usoro onu ogugu aghaghi ibu oke oke ya ka o rigo; ọ bụ ike SERM nke na-arụ ọrụ nke ọma na obere onunu ogwu. Maka ọgwụgwọ, ụdị ahụ Nolvadex usoro onunu ogwu bụ 10-20mg, nke a na-elekọta ugboro abụọ kwa ụbọchị.
Maka mmetụta nke estrogenic na pro-testosterone, nolvadex dosage kwesịrị ịdị n'etiti 10-40mg kwa ụbọchị. Usoro ogwu nke ị na-ahọrọ dabere na nha gị, ihe mgbaru ọsọ gị, na oge ole ịchọrọ ịnọ na ya.
Ọ dị mma ịmara na nolvadex dị elu karịa ọgwụ na-apụtachaghị uru. Mkpụrụ 10-40 ga-enye gị mmetụta dị ịrịba ama na ngwa ngwa nke ịchọrọ iji belata mmetụta ndị na-emerụ ahụ nke ịṅụ ọgwụ steroid.
Enweghị nlebara anya pụrụ iche e mere maka nlekọta nke Nolvadex. Ọ bụ nhọrọ ị na-ewere ya na tupu, mgbe, ma ọ bụ n'oge nri. I nwekwara ike inweta ya ma ọ bụ n'ụtụtụ. Mgbe ụfọdụ a na-adụ ọdụ ka ị ghara ịkewaa Nolvadex usoro onunu ogwu.
4. Nolvadex utịp
Nolvadex na - ebute igbochi ọrịa kansa bụ ụfọdụ n'ime ihe kacha mma ma e jiri ya tụnyere ọgwụ ọjọọ ndị ọzọ. Nsonaazụ gosiri 50% Mbelata ụmụ nwanyị ndị e mesoro maka ọrịa cancer na-abaghị uru. Iwere ya ruo oge ise ruo iri ka egosila na ọ ga-ebelata ụda nke otu ọrịa cancer ara na enweghi ike ibute ọrịa ara nke ọzọ.
Nolvadex na-emekwa ka ọ bụrụ ihe ngwọta dị mma maka ọgwụgwọ gynecomastia ma dịka ọgwụ na-egbochi ọgwụgwọ nakwa dịka ịmalite ịmalite ịmalite mmepe oge. Na nyocha omumu nke emere ndi mmadu iri n'ime otu onwa, asaa n'ime ha nwere mmuta karia oke ha. Mmadụ anọ n'ime ha bụ ndị tara ahụhụ site na gynecomastia na-egbu mgbu nwetara enyemaka. Enweghị mgbu ọ bụla.
Ọ na-enyekwa nsonaazụ dị mma ntinye nke mmepụta Testosterone dị ka a kọọrọ na ọ ga-alaghachi azụ mgbe izu anọ gasịrị.
5. Nolvadex ọkara ndụ
The Nolvadex ọkara ndụ enweghi ogologo oge ma e jiri ya tụnyere ogige ndị ọzọ. Ọ dị ihe dịka ise ruo ụbọchị asaa na ụfọdụ ọmụmụ na-egosi na ọkara ndụ Nolvadex nwere ike ịga ogologo oge iri na anọ.
6. Nolvadex n'akụkụ-mmetụta
Nolvadex bụ ọgwụ e mere ka ọ karịa afọ iri ise gara aga, ọ bụghịkwa ihe ijuanya na a mụọla ihe ọ bụla n'ime ya. O nwere ọtụtụ uru, mana e nwekwara Nolvadex mmetụta dị na ya nke ahụ nwere ike imekpa gị ahụ. Otú ọ dị, ọ pụtaghị na ọ bụrụ na ị malite iburu ya, ị ghaghị ịnata mmetụta nolvadex. Imirikiti oge, ị nwere ike ghara ịta ahụhụ site na nke ọ bụla n'ime ha.
Na mgbe mgbe, mmetụta Nolvadex nwere ike ikwu na ị ga-amalite na oge ole ị ga-ata ahụhụ na ha. O kwesịkwara icheta na mmetụta ndị dị na ya na-agbanwe mgbe niile ma na-apụ mgbe ọ bụla ị na-agwọ ya.
Ozugbo ị na-ege ahụ gị ntị, ị ga-achọpụta na mmetụta ndị dị na ya nwere ike ịdị njọ n'ọnọdụ ụfọdụ, ị nwere ike ibelata ma ọ bụ gbochie ha site n'ime mgbanwe ụfọdụ. Ụfọdụ n'ime mmetụta ndị nkịtị na-agụnye gụnyere;
Ọ dịghị onye chọrọ ime ihe na-adịghị mma, ma ọ bụrụ na ị na-eme ya nke ọma. Ọ bụ ezie na otu n'ime uru Nolvadex bụ na ọ na-eme ka nrụrụ testosterone dịkwuo elu, o nwekwara ike ibelata ịchụpụ nwoke na nwanyị. Nnyocha ndị e mere gosiri na ụfọdụ n'ime ndị Nolvadex na-eme mkpesa banyere obere libido, mana maka ndị ọzọ, ọ na-aghọ onye na-adịghị adị.
Ịfu ntutu nwere ike ịbụ ihe mgbu. N'ụzọ dị mwute, ọ bụ ihe na - eme mgbe nile na iji Nolvadex mee ihe.
Ọkụ na aka, nkwonkwo ukwu, na ụkwụ
Ọpụpụ nke mmiri
Nke a bụ mmetụta nolvadex dị mkpa nke mkpa nlekọta ahụike ozugbo;
A mgbanwe na ọhụụ gị
Mmetụta ịda mbà n'obi (enweghị ike ịrụ ọrụ gị kwa ụbọchị)
Nausea (enweghi ike iri nri ma ọ bụ nwee mmetụta ị kwadoro ọbụna mgbe ị ṅụrụ ọgwụ ọgwụ)
Nnukwu oke mgbu nke na-ejide ọbara ọgbụgba, ihe mgbu na oge nkwụsị
Ọkụ ọhụrụ ara.
Mgbapu, ihe mgbu, ma ọ bụ ọbara ọbara na otu n'ime ụkwụ ma ọ bụ ogwe aka, ọ bụghị nke ọzọ
7. Nolvadex uru
Ọtụtụ ndị anaghị ahụ gynecomastia ma ọ bụ ndị mmadụ dị ka ọnọdụ siri ike, mana n'eziokwu ọ bụ. Ọ bụ mmepe nke anụ ara n'ime ụmụ nwoke. Na-emekarị, ọ na-akpata mgbanwe na hormones ndị ọzọ n'ihi ihe ndị dị ka afọ maọbụ jiri steroid.
N'okwu a, mmụba nke etiti na estrogen / testosterone nwere ike ịbụ ihe kpatara ya. Ọzọkwa, mmụba estrogenic na-abawanye ma ọ bụ belata nke na-eme ka androgenic site na mmekọrịta estrogen ma ọ bụ androgen nwere ike ịbụ ihe kpatara ya.
Ndị mmadụ na-ata ahụhụ na ya anaghị ahụ naanị mgbanwe na ọdịdị ha, ma ọ pụkwara ime ka ha nwee mmetụta uche. Ndị ọzọ karịa ịdaghasị obi ike ha, ọ nwere ike ime ka onye dara mbà n'obi ruo n'ókè nke ịchọ ịchọta onwe ya. Ọbụna njọ, ọ nwere ike ime ka mmadụ gbalịsie ike zoo ha ebe ha na-aga na uwe elu na-ekpuchi ma zere omume ndị nwere ike igosipụta ahụ ha, ya bụ, igwu mmiri.
N'oge a, ọtụtụ ndị ikom na ọnọdụ a nọ na nche mgbe nile maka ngwọta na-adịgide adịgide. Ihe ọma bụ, otu n'ime Nolvadex uru bụ na ọ na-ebelata abụba ndị na-enweghị oke n'emeghị ka mmadụ nwee mmetụta dị egwu. Nolvadex, ya mere, na-enye ohere dị mma na nke dị irè n'ịgwọ ụfọdụ n'ime okwu gynecomastia.
Gbanwee oke akwara
Usoro nke inweta nkpọkpu akwara yiri ka o siri ike. Ihe niile a gwara gị ka ị na-ebuli ihe dị arọ, na-eri ihe nri kwesịrị ekwesị, ma were ihe nchịkọta kachasị mma. Ị na-eche ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị kụrụ ala dị larịị? Kedu ụdị ngwaahịa ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụtụ ya? Kedu ka ị si eme ka mpi gị dịkwuo elu?
Eziokwu nke otu n'ime Nolvadex na-eji bụ ịba ụba testosterone n'ime ahụ na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ ziri ezi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ahụ ike gị dị arọ. Ọ na-eme nke a site na ime ihe hypothalamus na ụbụrụ gbụrụ na ụbụrụ. Nke ahụ na - eduga n'ọganihu na mmepụta nke eriri (Foo) na - atụgharị (FSH) na Luteinizing hormone (LH), bụ nke na - akwalite mmepụta Testosterone site na testes.
N'ịkọwapụta, ọ bụrụ na nwoke na-ewere 20mg Nolvadex ruo ụbọchị iri, ọ ga-abụ na 41% na-arịwanye elu nke testosterone n'ọbara ha. Ọ bụrụ na a na-eji izu isii, ọkwa testosterone nwere ike ịga dị ka 84%.
Testosterone bụ hormone nke mmepụta ya na-ahụkarị na ahụ. Ọ na-enyere aka melite njikọ nke protein muscle, n'etiti ọrụ ndị ọzọ. Ihe dị iche iche nwere ike igbochi mmepụta testosterone. Iji gbochie nke a, ịnwere ike iji Nolvadex mee ka mmepụta nke testosterone mụbaa.
Ọgwụgwọ Ọgwụgwọ Post Post
Nolvadex bụ otu n'ime ndị na-abụghị steroidal SERMs, si otú a gosipụta ma mmegha ahụ Estrogenic na mmetụta nke etu na estrogenic na ahụ. Nke ahụ pụtara na na mpaghara ụfọdụ, ọ nwere ike ibute mmetụta estrogenic ma na ụfọdụ, ọ nwere ike ibute nsogbu antiestrogenic. Otu n'ime ihe dị otú ahụ bụ mmụba nke mmepụta nke testosterone. Ọ na-ebelata mmetụta nke estrogen n'ime ahụ.
Ọ bụ n'ihi nke a ka a na-ewere Nolvadex dị ka ihe dị oké mkpa mgbe mmadụ chọrọ ịmalite usoro ọgwụgwọ. Nke ahụ bụ n'ihi na mgbe ha gbasịrị usoro ọgwụ nje anabolics, ha nwere ike ịtụgharị ya n'ime estrogen. N'ihi ya, otu onye nwere ike ịnweta mmadụ, nke pụtara na uru gị na-aga n'iyi. Site n'inweta estrogen, enwere mmetụta dị otú ahụ na mmiri. Ogologo testosterone nwere ike ịlaghachi na nkịtị n'ihi nolvadex.
Emekarị, Nolvadex na-edozi ozugbo ọ bụla ndị na-arịa ọrịa anabolic na-esi n'ahụ onye ahụ pụọ. Mmadụ kwesịrị iji 20-40mg kwa ụbọchị maka izu anọ na isii. Ego ọ bụla dị elu karịa nke ahụ adịghị enye mmetụta ọ bụla dị ịrịba ama ọzọ.
N'oge PCT, a na-elekọta Nolvadex na ọ dịkarịa ala otu ma ọ bụ abụọ Testosterone na-akpali akpali ogige dị ka onye na-emepụta aromatase dị ka HCG ma ọ bụ Aromasin. Uru nke iji ha mee ihe bụ iji mee ka mmetụta dị elu ma kwalite ọrụ HPTA.
Otú ọ dị, a ghaghị izere Nolvadex n'oge oge okirikiri ma ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-egbochi mmebi Testosterone n'ihi na o yikarịrị ka ọ gaghị arụ ọrụ. Nke ahụ nwere ike ịpụta na ego gị ga-agbada na drain.
N'adịghị ka afọ ole na ole gara aga, a na-ewere ugbu a dị ka otu n'ime tiketi na-achọ mma. Ndị ọzọ karịa ịnwegharị azụ, ịdị arọ nwere ike ịpụta na ịchọrọ ịka ahụ ike. Otú ọ dị, imechi calorie ndị ọzọ bụ, Otú ọ dị, ọ bụghị ihe dị mfe. Otu n'ime ụzọ ndị ị ga - esi nwee ihe ịga nke ọma n'ibu njem ọnwụ gị bụ site n'iji Nolvadex eme ihe.
Nnyocha e mere na Nolvadex utịp na ọnwụ ọnwụ na-egosi na ọ dị irè na ọtụtụ n'ime ihe ndị na-enye aka na njikwa arọ. N'ozuzu, Nolvadex egosila na ya nwere ike inye aka n'anụ ahụ ka ọ na-esure abụba karịa mgbe mgbochi metabolism na-eduga na ọrụ lipolytic dị mma nke mere mmụba na abụba abụba.
Tinyere Clenbuterol, ha nwere ike iduga na ọrụ lipoprotein lipase nke dị oké mkpa enzyme na metabolism nke triglyceride. N'ihi ya, ha abụọ nwere ike ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Ọzọkwa, A maara Nolvadex iji mee ka ikike ahụ nwee ike ịba abụba ma mee ka ike dị elu nke dị oké mkpa na usoro abụba ọkụ.
Ọ na-eme ka usoro ọrụ ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dị ike
Mgbe anyị na-ekwu maka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, anyị na-ekwu banyere ikike ịlụso ọrịa na ọrịa ọgụ. Ọtụtụ ndị na-amaghị, Nolvadex nwere mmetụta dị mma na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
8. Nolvadex nyocha
Alexandra M. kwuru, sị, "Anọ m na-arụ ọrụ maka ọnwa isii gara aga, ọkpụkpụ ahụ anaghị agbanwekwa dị ka m tụrụ anya ya. Amalitere m ịchọ ihe ga-eme ka m nwee ike ịkwa ụba wee biri Nolvadex. Nolvadex nsonaazụ dị nnọọ egwu. Isi ike m na-amụba amụba, ọ dịkwa m ka ngwaahịa a kwesịrị ịkele maka otu. Ana m enye ya onye ọ bụla nke na-achọ ka enwe nnukwu ahụ ike. "
Nri ọgwụ kachasị mma
Priscilla K na-ekwu, sị, "Mgbe nzachara nyocha, achọpụtara m na otu n'ime uru Nolvadex bụ nfu efu. Enweghị m ike ichere iji nwalee ya, ozugbo ahụ, m nyere ya iwu; Enwetara m ngwugwu m otu ụbọchị. Ruo ugbua enwere m kilogram iri, enweghi m obi uto a. Ugbu a, ọ bụrụ na m na-aṅụ ọgwụ ọjọọ, ma ndị enyi m na ezinụlọ m chọrọ ịnwa ya. Enweghị m nsogbu ọ bụla nke Nolvadex ruo ugbu a, n'adịghị ka ihe m mere mgbe m na-eji ọgwụ ndị ọzọ na-efu ọnwụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye ụfọdụ na-enweghị ụbụrụ na obi gị ga-ata ahụhụ, mgbe ahụ Nolvadex bụ ihe ị ga-aga. "
Ọ bụ ọrụ ebube
Leila Wagner kwuru, sị, "Enwetara m ọrụ ebube Nolvadex n'izu gara aga. Na-eche ọrụ ebube ọ ga-abụ? Mgbe m gbalịsịrị ịtụrụ ime afọ iri gara aga n'enweghị mmeri, emesịrị m enyocha ezi ihe site n'enyemaka nke Nolvadex, ma ugbu a, m na-ejide ụtụ m nke ọṅụ. Amaghị m ma m ga-enwe ike ibu ya na oge, obi dịkwa m ụtọ na m mechara mee. M ka na-ekwenyeghị, m wee kpọọ aha m ọrụ ebube nwa m. Onye ọ bụla nke na-agbalị ịtụrụ ime kwesịrị inye Nolvadex a nwaa. "
Best PCT ọgwụ
Cassie Houston na-ekwu, "M nyere iwu maka ngwaahịa a maka di m n'ihi na ọ malitere ịzụlite ara site na iji steroid. Ọ na-emetụ ya n'ahụ nke ukwuu nke na ọ nara ọbụna ezumike ọrịa n'ihi ihere. Nkwa ya dị ala, kwa, anyị enwekwaghị mmasị iso ọnụ. Mgbe ọ nọ na ngwaahịa a, ọ na - ekwu na nsonazụ Nolvadex dị ịtụnanya. Ihe niile agbanweela ugbu a, ọ laghachikwa na nkịtị. Ala ndị ahụ ejirila nwayọọ nwayọọ belata, ọ laghachikwara ọrụ. Libido dị oke ugbu a. Ekwenyere m na nke a bụ PCT kasị mma nke ga-enye Testosterone ume. "
9. Nolvadex maka ire ere
Ị nwere ike ịchọrọ zụta Nolvadex ntụ ntụ dị ka ọgwụ PCT ma ọ bụ iji zụnyeghị infertility. Ọzọkwa, ị nwere ike ịchụso nnukwu akwara ma ọ bụ chọọ inwe ibu arọ karịa ngwa ngwa. Ajụjụ bụ isi bụ ebe ị nwere ike ịnweta ya?
Otu n'ime ajụjụ ndị mmadụ kacha ajụkarị bụ ebe ha nwere ike ịzụta Nolvadex ntụ ntụ. Ọ bụghị nanị na ịzụta ya ma nweta otu ezigbo mma na ọnụahịa dị mma. N'iburu n'uche na e nwere ọtụtụ ụzọ ntanetị ị nwere ike ịzụta, ị nwere ike ghara ijide n'aka onye nke na-enye Nolvadex nke na-adịghị ize ndụ.
Iji jide n'aka na ị na-azụ ihe ziri ezi, ị nwere ike ịhọrọ ịzụ ihe Nolvadex maka ire ere site na anyị. I nwekwara ike ịzụta Nolvadex na nnukwu ego ma ọ bụrụ na ebumnuche gị na-ere ya. Ihe dị mma bụ na site na Nolvadex anyị, enweghi ike ịmalite ikuku afọ ma ọ bụ nsị na ya; ọ bụ ezigbo Nolvadex.
10. Nolvadex na-emeso infertility na nwanyị
Inwe nsogbu na-echegbu ma na-enwe nchekasị? Ị nọghị sọ gị. Ọnụ ọgụgụ na-egosi na gburugburu 7% nke ndị inyom di na nwunye nwere nsogbu ịmụghị ahụmahụ n'ụwa nile. Otú ọ dị, ọ pụtaghị na ọ bụrụ na onye nwere nsogbu, ha agaghị enwe ohere ijide nwa ha.
Otu n'ime isi okwu ndị na-enye aka n'erughị afọ bụ nsogbu nsogbu ovulation. Ha nwere ike ime site na ọrịa polycystic ovary, nke a na-ekwu na ọ bụ enweghị nchepụta hormonal nke mere na ọ na-egbochi ịkpụ nwa. Ozi ọma ahụ na e nwere ọgwụ ndị e nyere ọnụ ma ọ bụ site na ogwu nke na-enyere aka mepụta àkwá ma ọ bụrụ na ha enwewo nsogbu ọ bụla. Ya mere, ha na-eme ka ohere ịmụ nwa na-aga n'ihu.
Site na nke a, mmadụ nwere ike ime oge ziri ezi na ime ka ohere ịtụrụ ime pụta. Otu n'ime Tamoxifen Citrate ntụ ntụ uru bụ na o gosipụtara ịkwalite ịzụ ụmụ na-arụpụta nke ọma. Ọzọkwa, ọ na-akpali ndị ovaries ịmepụta ọtụtụ àkwá ma ọ bụrụ na otu onye na-arụpụta otu. Ihe dị na ya bụ na iji ya eme ihe adịghị dị oké ọnụ ma dị ize ndụ dị ka iji gonadotropin (ọgwụ ovulation injectable).
Uwe na-adaba n'otu klas dịka Nolvadex, a na-ejikarị ha abụọ eme ihe banyere ịgwọ ọrịa ọrịa ovula na ụmụ nwanyị na-enweghị ike. Ha na-arụ ọrụ otu ụzọ ahụ ma gosipụta na ha ga-enyere aka ịmụ nwa na 65-75% nke ụmụ nwanyị. Otú ọ dị, ọ na-enwe mmetụta dị ka thinning nke endometrial lining n'ihi ya enweghị ike ịtụrụ ime. N'aka nke ọzọ, ọ dịghị akụkọ e mere na mmetụta Nolvadex na akpanwa.
Tamoxifen: E wezụga Antiestrogen, Site na John A. Kellen, peeji nke 1-201
Tamoxifen, Dr. Titus Marcus, na-ebipụtaghị onwe ya, bipụtara 29thMarch 2019, 1-18